Iindaba - Izizathu ezihlanu zokusebenzisa umatshini wokusika weLaser
Ukusika i-Laserluhlobo olungadibaniyo, olusekwe kwinkqubo yokuvelisa ubushushu edibanisa ubushushu obujolise kumandla obushushu, kwaye isebenzise uxinzelelo ekunyibilikiseni nakwizinto zokutshiza kwiindlela ezimxinwa okanye ukusikwa. Xa kuthelekiswa neendlela ukusika yemveli, laser ukusika ineendlela ezininzi. Amandla agxile kakhulu ekuboneleleni ngolawulo lwe-laser kunye ne-CNC unokuzisika ngokuchanekileyo izinto ezivela kubukhulu obahlukeneyo kunye neemilo ezinzima. Ukusika i-Laser kunokufikelela kukuchaneka okuphezulu kunye nokuveliswa okunyamezelana kancinci, ukunciphisa inkunkuma yezinto, kunye nenkqubo yezinto ezahlukeneyo Inkqubo yokusika i-laser ingasetyenziswa ngokubanzi kwizicelo ezahlukeneyo zokuvelisa, kwaye iye yaba yinto exabisekileyo kushishino lweemoto, ukuvelisa iindawo ezintsonkothileyo nezingqindilili ngezixhobo ezahlukeneyo, ukusuka kwimilo ye-3D efakwe kwi-hydroformed to airbags. Umzi mveliso we-elektroniki ochanekileyo usetyenziselwa ukugqiba ukutyabeka iintsimbi okanye izinto zeplastiki, izindlu, kunye neebhodi zesekethe. Ukusuka kumasifundisane wokulungisa ukuya kwiindibano zocweyo ezincinci ukuya kumashishini amakhulu, babonelela abavelisi ngezibonelelo ezininzi. Ezi zizathu zintlanu zokuba kusetyenziswa ukusika kwe-laser echanekileyo.
Ukuchaneka kunye nomgangatho osekupheleni kwezinto ezisikwe nge-laser zibhetele kunezo zisikwe ziindlela zemveli. Ukusika i-Laser kusetyenziswa umqadi ojolise kakhulu, osebenza njengendawo echaphazeleka bubushushu ngexesha lenkqubo yokusika, kwaye ayizukubangela umonakalo omkhulu we-thermal kwindawo ekufutshane. Ukongeza, inkqubo yokusika irhasi yoxinzelelo oluphezulu (ihlala i-CO2) isetyenziselwa ukutshiza izinto ezinyibilikisiweyo ukususa izinto zokusika izixhobo zemisebenzi emincinci, ukucoceka kucocekile, kwaye imiphetho yeemilo eziyinkimbinkimbi kunye noyilo ilula. Umatshini wokusika we-laser unolawulo lwekhompyuter (CNC), kunye nenkqubo yokusika i-laser inokulawulwa ngokuzenzekelayo yinkqubo yomatshini esele yenzelwe. Umatshini wokusika we-CNC olawulwa yi-CNC unciphisa umngcipheko wempazamo yomqhubi kwaye uvelise iindawo ezichanekileyo ezichanekileyo, ezichanekileyo kunye nokuqina.
Ukuphucula ukhuseleko kwindawo yokusebenza
Iziganeko ezibandakanya abasebenzi kunye nezixhobo kwindawo yokusebenza zinefuthe elibi kwimveliso yenkampani nakwiindleko zokusebenza. Ukulungiswa kwempahla kunye nemisebenzi yokuphatha, kubandakanya ukusika, ziindawo apho iingozi zihlala zisenzeka. Ukusebenzisa i-lasers ukusika ezi zicelo kunciphisa umngcipheko weengozi. Kuba yinkqubo engadibaniyo, oku kuthetha ukuba umatshini akayichukumisi ngokwasemzimbeni loo nto. Ukongeza, isizukulwana somqadi asifuni naluphi na ungenelelo lomqhubi ngexesha lenkqubo yokusika i-laser, ukuze umqadi wamandla aphezulu ugcinwe ngokukhuselekileyo ngaphakathi komatshini otywiniweyo. Ngokubanzi, ngaphandle kokuhlolwa kunye nokugcinwa kwemisebenzi, ukusika i-laser akudingi ungenelelo lwencwadi. Xa kuthelekiswa neendlela zokusika zemveli, le nkqubo inciphisa ukunxibelelana ngokuthe ngqo nomphezulu womsebenzi, ngaloo ndlela kuncitshiswa ukubakho kweengozi zabasebenzi kunye nokwenzakala.
Izinto ezininzi eziguquguqukayo
Ukongeza ekusikeni igeometri ezintsonkothileyo ngokuchaneka okuphezulu, ukusika kwe-laser kuvumela abavelisi ukuba basike ngaphandle kotshintsho loomatshini, besebenzisa izinto ezininzi kunye noluhlu olubanzi lokuqina Sebenzisa umqadi ofanayo kunye namanqanaba okuphuma ahlukeneyo, ubunzima kunye nobude, ukusika kwe-laser kunokusika iintlobo ezahlukeneyo zesinyithi, kunye nohlengahlengiso olufanayo kumatshini lunokucheba ngokuchanekileyo izinto ezahlukeneyo. Izinto ezihlanganisiweyo ze-CNC zinokuzenzekelayo ukubonelela ngokusebenza okunomdla ngakumbi.
Ixesha elithathwayo ukuseta kunye nokusebenzisa izixhobo zokuvelisa ziya kukonyusa indleko zemveliso nganye, kwaye ukusetyenziswa kweendlela zokusika i-laser kunokunciphisa ixesha lokuhambisa lilonke kunye neendleko zizonke zemveliso. Ukusika i-laser, akukho mfuneko yokutshintsha kwaye usete ukungunda phakathi kwezinto okanye izinto eziphathekayo. Xa kuthelekiswa neendlela zokusika zemveli, ixesha lokuseta i-laser liya kuncitshiswa kakhulu, kubandakanya ukwenziwa komatshini ngakumbi kunokulayisha izinto. Ukongeza, ukusika okufanayo nge-laser kunokuba ngamatyeli angama-30 ngokukhawuleza kunokusarha ngokwesiko.
Iindleko zezinto eziphantsi
Ngokusebenzisa iindlela zokusika i-laser, abavelisi banokunciphisa inkunkuma yezinto eziphathekayo. Ukugxila kumqadi osetyenziswa kwinkqubo yokusika i-laser kuya kuvelisa ukusika okucothayo, ngaloo ndlela kuncitshiswe ubungakanani bendawo echaphazelwe bubushushu kunye nokunciphisa ukonakaliswa kobushushu kunye nobungakanani bezixhobo ezingasetyenziswanga. Xa kusetyenziswa izinto eziguquguqukayo, ukususwa okubangelwa zizixhobo zoomatshini bokunyusa kukonyusa inani lezinto ezingenakusebenziseka. Uhlobo non-contact of laser ukusika ishenxisa le ngxaki. Inkqubo yokusika i-laser inokucheba ngokuchaneka okuphezulu, ukunyamezelana okungaphaya, kunye nokunciphisa ukonakala kwezinto kummandla ochaphazele ubushushu. Ivumela ukuba uyilo lwenxalenye lubekwe kufutshane kakhulu kwizixhobo, kwaye uyilo oluqinileyo luyanciphisa inkunkuma kwaye linciphise iindleko ezibonakalayo ixesha elininzi.